Welcome to Aayaha Nolosha » SAAXIIBKA KUUGU DHOW WAA XAASKAAGA.
SAAXIIBKA KUUGU DHOW WAA XAASKAAGA.
May 13, 2018 - Waxaa Qorey : Mohamed farah -
Inta badan markaan ka hadlayno Saaxiibka, Waxa aan laacnaa meelo inaga dheer iyo dad aan Saameyn weyn ku lahayn nolosheena oo aan u Saarnaa eeda guuldarooyinka aan la Kulano. Balse waxaa wanaagsan in aan la Ogaado Saaxiibka runta ah ee kuugu dhow kaas oo kula wadaagaya Guulaha iyo Guuldarada aad kala kulanto nolosha, Macaan iyo Kharaar kii ay doonto ha ahaato ee.
Ogow Saaxiibka ugu horeeya ee kuugu dhow in uu yahay Xaaskaaga. Suxufi bishii hore u dabaaldagayey Sanadguuradii Arooska Isaga iyo Xaaskiisa ayaa Ku Tilmaamey Marwadiosa in ay ahayd JABANE KABTO Allaha Barakeeyo ee taas oo sida uu sheegay Garab weyn ku siisey in ay ka gudbaan dhibaatooyinka Nolasha. Marar badan ayaa dhagahaagu ay ku soo dhaceen nin kasta oo Madaxweyne ah oo Ummad hogaamiya waxa ka danbeysa gabar oo loola jeedo in ay heerkaa soo gaarsiisey Xaaskiisa.
Marka aan Jaleecno dhinaca diinteena Suuban, Nabi Ibraahim CS. Markii uu soo booqdey guriga Wiilkiisa oo ka maqan ayuu xaaskiisii weydiiyey sida Xaalkoodu yahay, Gabadhii aad ayey u Calaacashey iyada oo dhibaato badan sheeganeysa, Fariin ayuuna ugu reebay wiilkiisii taas oo ahayd “In wiilkiisa uu badalo Albaabka Guriga” Markii uu yimid wiilkii oo ay gabadhii u sheegtay fariintii wuu gartey gabadhiina halkii ayuu ku furey.
Xaas kale ayuu guursadey markalana waa uu Soo booqdey Nabi Ibraahim CS Waxa uuna Weydiiyey gabadhii Xaalkooda waxayna u sheegtey “In ay aad u Wanaagsanyihiin oo illaahay u Nimceeyey” Siddii oo kale Waxa uu Wiilkiisa u farey Fariin ah “In Albaabka guriga uu adkeeyo” Oo uu ila jeeday in ay tahay qof Wanaagsan. Oo iimaan leh Xaalad kastana ku qanacsan.
Haddaba iyada oo ay isla socdaan Wanaaga qofka iyo Iimaanka uu alle Siiyey ayaa loo baahan yahay in labada qof ee Wada jira ay yihiin kuwo iska kaashada dhibaata kasta, haddii Xaalad adag ku timaadana ay la yimaadaan fikir Saliim ah oo ay kaga gudbaan iyaga oo ku qanacsan qadarta alle.
Guusha aad gaarto waxa ay ku xirantahay Saaxiibka kuugu dhow oo Xaaskaaga ah oo illaahay Kaaga dhigo Mid Wanaagsan oo ku garab taagan, kulana Qaybsta dhib kasta, taas oo ah mida Kaliya ee kaaga dhow Saaxiib walba Isbadalka noloshaadana Saameyn weyn ku leh.
Haddaba Waxaa haboon in labada qof ee Wada jira ay noqdaan kuwo Dhibta iyo Dheefta isla Wadaaga Daruufahana aan la isku nicin ee loo wada gurmadao siddii looga gudbi lahaa loona gaari lahaa Guusha nolosha iyo horumarka.
Mohamed Farah Duurgal.